E-commerce dziviriro yewebhu | ECommerce nhau
E-commerce mawebhusaiti Ivo vanofanirwa kutora ese anodiwa machengetedzo matanho ekuvimbisa kudzivirirwa kwevatengi vavo 'zvemunhu uye zvemari ruzivo.
Mupfungwa iyi, inotevera tinokuda shandisa mamwe ezve akanakisa matipi ekuchengetedza eEcommerce mawebhusaiti.
1 Kusarudza yakachengeteka ecommerce chikuva
2 Shandisa zvakachengeteka kubatana kwekutenga pamhepo
3 Usachengetedze data rakaomarara
4 Shandisa kero yekuongorora kero
5 Inoda mapassword akasimba
6 Pfungwa dzakakosha dzinovimbisa kuchengetedzeka kweCommerce yako
6.1 Iyo PCI standard
6.2 Shandisa kumwe kuchengetedzeka
6.3 Chinja saiti yako kuenda kuHTTPS
6.4 Seta alarm
6.5 Kugara uchigadzirisa
6.6 Chengeta wachi inopfuurira
7 Maitiro ekuziva kana yako eCommerce yatambura nekutyorwa kwekuchengeteka
Kusarudza yakachengeteka ecommerce chikuva
Zvirinani shandisa a e-commerce chikuva uko admin pani isingasvikike kune vanorwisa uye inongowanikwa pane yekambani yemukati network uye kubviswa zvachose kubva kuruzhinji-parutivi maseva.
Shandisa zvakachengeteka kubatana kwekutenga pamhepo
Inokurudzirwa kushandisa maprotocol ekuchengetedza senge Yakachengeteka Socket Layer (SSL) yewebhu yechokwadi uye dziviriro yedata. Izvi zvinodzivirira zvese kambani nevatengi uye zvinodzivirira vekunze kuwana ruzivo rwemari kana rwakakosha. Zvirinani izvozvi, sanganisa EV SSL (Yakawedzerwa Kuvimbiswa Yakachengeteka Socket Layer), kuitira kuti vatengi vazive kuti iyi yakachengeteka webhusaiti.
Usachengetedze data rakaomarara
Hapana chikonzero chekuita chengetedza zviuru zvevatengi zvinyorwa, kunyanya nhamba dzekadhi rechikwereti, mazuva ekupera kwenguva kana CW2 (Kadhi Verification Value) kodhi. Zvinokurudzirwa kudzima zvekare zvinyorwa kubva mudhatabhesi uye chengetedza hushoma huwandu hweruzivo, hwakaringana mushandisi mhosva uye kudzoreredza.
Shandisa kero yekuongorora kero
Shandisa Kero Verification System (AVS) uye Kadhi Kukosha Verification (CVV) yezve kiredhiti kiredhiti uye nekudaro kudzikisira kubiridzira mhosva.
Inoda mapassword akasimba
Kunyange iri basa re mutengesi chengetedza ruzivo rwevatengi rwakachengetedzwaIri zvakare zano rakanaka kuvada kuti vashandise mapassword akasimba. Mazita emazita akareba uye mapassword ekuwedzera akaomarara anoita kuti basa riwedzere kuomera vapari vemakomputa.
Pfungwa dzakakosha dzinovimbisa kuchengetedzeka kweCommerce yako
Kufunga nezvazvo kusimuka kweCommerce kana zvitoro zvepamhepo, uye kuti vanhu vazhinji vari kutanga kutenga kuburikidza neInternet, zviri pachena kuti iwe unoda kuti chitoro chako chigare chakachengeteka sezvinobvira. Uye, ivo vanobiridzira varipo, uye kunyangwe iwe uchigona kufunga kuti bhizinesi rako harina kukosha zvakakwana kuti vaedze kuwana iyo data raunochengeta, iwe unofanirwa kupa chengetedzo kune iro rakashata data. Idzo dzakavanzika data revatengi uye, kana paine zvabuda, unogona kurasikirwa nekuvimba kwavo (zvichivaita kuti vasade kutenga kubva kwauri vachitya kuti dhata ravo richagovaniswa paInternet (kana pawebhu dema).
Naizvozvo, pamusoro pezvose zvataurwa pamusoro apa, tinokukurudzira kuti unyatsoteerera:
Iyo PCI standard
Kana iwe usingazive, iyo PCI DSS standard, inozivikanwawo se Kiredhiti Kadhi Indasitiri - Dziviriro Dhata Maitiro Izvo "zvinosungirwa" kutevedzera eCommerce. Izvi zvinoenderana nekugadzira murawo kumasangano anozo chengeta, kuchengeta uye kuendesa data revanobata makadhi
Mune mamwe mazwi, zvinobatsira kunyorera iyo data kuitira kuti irege kuverenga kana kuitira kuti igone "kubiwa." Uye hongu, iwe unofanirwa kutevedzera iwo mirau nekuti kana ukasazviita uye vakazoona, vanogona kukupa uye vobvisa faindi ichave yakanyanya kukwirira.
Shandisa kumwe kuchengetedzeka
Mitemo inobatsira kuwedzera matanho ekuongorora. Ehe, ivo vanogona kuve vanofinha uye vanokonzeresa vatengi kutora mamwe matanho; asi mukudzoka uri kuzovapa chengetedzo yese yavanoda kutenga muchitoro chako. Ehe, ivo kuti vazive izvo, zvakafanira kuti uvazivise, nekuti, zvikasadaro, ivo havazive uye vanogona kusavimba kana kusiya izvo zvekutenga nepakati nekuti vaneta nematanho.
Imwe iyo Tinogona kukurudzira 3-D Yakachengeteka, protocol yemakadhi eVisa uye MasterCard anobatsira kuwedzera danho rekutarisa, kuitira kuti pasave nekubiridzira kwekubiridzira pasina munhu iyeye kuziva nezvazvo. Zvakafanana nePIN iyo inotumirwa kumubati wemakadhi uye kuti ivo vanofanirwa kupinda kuti vapedze odha (kana vakasadaro, odha yacho yakadzimwa uye zvinoita sekunge vasina kumboita).
Chinja saiti yako kuenda kuHTTPS
Makore mashoma apfuura, HTTPS yaingoshandiswa chete pachikamu chekubhadhara chewebsite. Zvino, izvi, pamwe chete nezvitupa zveSSSL hazvina kuganhurirwa kune iro peji rewebhu chete, asi kune ese ayo. Chinangwa ndechekuchengetedza iyo webhu pese pakurwiswa kunogona kuitika.
Saka ikozvino unogona chinja saiti yako kuenda kuHTTPS nesitifiketi chako cheSSS kuti upe chengetedzo huru. Kana iwe usingazive kuzviita, iwe unogona kukumbira yako yekutambira sevazhinji vanopa sevhisi iyi.
Imaaramu muCommerce? Chaizvoizvo? Hongu hongu, hatina kukanganisa. Zviripachena, hazvizove kunge muchitoro chaicho; asi maalarm aripowo ezvitoro zvepamhepo. Izvo zvazvinoita taura zviitiko zvinofungidzirwa, semuenzaniso, kutengeserana neiyo IP kakati wandei, kana maodha akasiyana akaitirwa munhu mumwechete asi nemakadhi echikwereti akasiyana.
Kana izvozvo zvikaitika, vanokutumira email kukuraira uye unogona kubata munhu kuti aone zviri kuitika uye kana chiri chinhu chavakaita vachiziva kana paine kukanganisa.
Kazhinji, zvitoro zvepamhepo zvinoenderana nesystem, ingave iri Prestashop, WordPress ... Eya, aya masisitimu anovandudzwa nguva nenguva nekuti anogadzirisa mafaira kuti agare akachengeteka zvakanyanya.
Naizvozvo, zviri nyore kuti gadziridza yega nguva nenguva kuitira kuti system irege kubuda muchinyakare (nekuti kana paine zvigadziriso zvinogona kunge zvichikonzerwa nekumwe kukanganisa kunofanira kugadziriswa, uye kana ukasaita kudaro, unoisa njodzi yekuti ivo vanozoedza kuba ruzivo rwako rweCommerce).
Chengeta wachi inopfuurira
Izvo zvakakosha kuti, sekungofanana muchitoro chemuviri iwe wakangwarira kune zvese kutarisira matambudziko ezvekuchengetedza, iwe zviitewo mune yako online chitoro. Kuti uite izvi, tinokurudzira kuti iwe uite inoongorora mazuva ese, uye kunyangwe vaviri vacho munguva dzakasimba, dzakadai seKisimusi, Zuva reValentine, zuva raamai nababa, mazororo, nezvimwe.
Iwe unofanirwawo tarisa yako antivirus system, pamwe nemamwe maturusi ekushandisa awakashandisa.
Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuona kuti zvese zvinoshanda nemazvo uye kuti hapana matambudziko.
Ramba uchifunga kuti yako eCommerce ibasa rako uye iyo data inosiyiwa nevatengi mairi zvakare inova yako basa rekuvadzivirira, nekudaro, kana ukatadza, unenge uchikuvadza mufananidzo wako kune vashandisi.
Maitiro ekuziva kana yako eCommerce yatambura nekutyorwa kwekuchengeteka
Kunyangwe zvisiri izvo zvataizoda, uye hapana munhu ane eCommerce angazoda kuzviwana vari mumamiriro ezvinhu aya, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuitira, zvachose, iwe ukaona kuti iwe wakakanganisa kuchengetedzeka. zvekuita pakadai? Inofanirwa kutaurwa kumwe kunhu here? Chii iwe chaunofanirwa kuita?
Zorora, isu tinokupa iwe matanho pazasi.
Kana eCommerce yako ikatyora kuchengetedzeka, zvinoitika ndezvekuti data revatengi vako rinogona kukanganiswa, ndiko kuti, mumwe munhu anogona kunge akavatora. Pamberi, iwe waifanira kungoinyora pasi muIzviitiko Registry uye nekugadzirisa. Asi ikozvino, neData Kudzivirirwa Regulation, iwe unofanirwa ku:
Zivisa Data Protection Agency.
Tumira email kune avo vanofarira (vako vatengi) kuraira nezve izvo zvaitika). Isu tinoziva kuti hachizove chinhu chakanaka, asi zvirinani kuti usaedze kuviga izvi asi kuti zvizivise nekukurumidza sezvinobvira kuitira kuti vashandisi vazvipe pachavo kune zvingangoitika kurwisa.
Gadzirisa gap nekukurumidza. Vakuru vanozotarisira kuteedzera matsotsi uye iyo data inogona kunge yakabiwa kubva kwauri, asi iwe unofanirwa kugadzirisa iro dambudziko rekuchengetedza nekukurumidza sezvazvinogona. Kana iwe usina ruzivo rwakakodzera, tinokurudzira kuti uvimbe nenyanzvi kana makambani anobvumidza iwe kuti uve ne "fireproof" eCommerce. Uye, kunyangwe usinga zvitende, izvi zvakakosha kuti uve nemukurumbira paInternet nekuti, kana ukasadaro, iwe unofunga vatengi vemazuva ano vanozokuvimba here? Uye vatengi venguva yemberi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Ecommerce webhusaiti chengetedzo